Movies – Lins Myanmar
ပင်စိမ်း အပင်၏ ကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးဝင်ပုံများ
Video Fashion, Movies | January 3, 2016 | gwein@nanolabs.asia
ပင်စိမ်း အပင်၏ ကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးဝင်ပုံများ 👇 ပင်စိမ်းအပင်ကို အိမ်တွင် စိုက်ထားသင့်ကြောင်း 👇 1. ပင်စိမ်း အရွက်ကိုနေတိုင်းစားပေးခြင်းအားဖြင့် အူလမ်းကြောင်း ဝမ်းဗိုက်နှင့် ပါးစပ်တွင်ဖြစ်တက်သောရောဂါများ ကင်းဝေးပီး အစာခြေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါသည် ။ 2. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ရေထဲတွင်စိမ်ပြီး နေတိုင်းသောက်လာပါက ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။ 3. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ပထမရက် ရေချိုးမည့်ရေတွင်စိမ်ထားပြီး နောက်နေ့ရေချိုးပါက ချွေးအနံ့ မထွက်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။ 4.
Video Movies, Music | January 3, 2016 | gwein@nanolabs.asia
အကယ်၍ သင်သည် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားနေရမည် ဆိုလျှင် တစ်နေ့တာလုံး စိတ်ကြည်လင်မှု မရှိဘဲ ဝေဒနာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကိုပါခံစားရနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည် နေ့လယ်ပိုင်းလောက်တွင် အဖြစ်များလေ့ရှိပြီး အချိန်ကြာလေလေ ပိုပြင်းထန်လေ ဖြစ်တက်ပါသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကြောင့် လည်ပင်း၊ ပခုံးနှင့် ဦးခေါင်းနား တဝိုက်ကြွက်သားများ မာကြောတောင့်တင်းလာတက်သည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ခံစားနေရသော လူတစ်ယောက်၏ အချိန်တွေသည် ဘဝမှာ စိတ်ညစ်စရာ အကောင်းဆုံး အချိန်များပင်
၁။ကနျစှနျးဥစားပါ ကနျစှနျးဥမှာ ညဘကျ အမွငျ အာရုံ အားကောငျးစတေဲ့ ဗီတာမငျအေ မြားစှာ ပါဝငျပွီး မုနျလာဥ (Beetroot)မှ ပါဝငျတဲ့ Anthocyanin တှဟော မကြျစိမှ သှေးကွော ငယျတှေ သှေးယို စိမျ့မှု မဖွဈအောငျ ကာကှယျနိုငျတဲ့ အတှကျ Retinopathy (မကြျစိ မမွငျရတဲ့ အကွောငျးရငျး တဈခု) မဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျ ပေးနိုငျပါတယျ။